Tulee, taata ka okwukwe gi siri sie ike Ahụrụ m Jizọs n'anya
Tughariakwa ta taa ka okwukwe gi si zie ezi
di Paolo Tescione - November 14, 2020
"Mgbe Nwa nke mmadụ ga-abịa, ọ ga-ahụ okwukwe n'elu ụwa?" Luk 18: 8b
Nke a bụ ezigbo ajụjụ na-atọ ụtọ Jizọs jụrụ Ọ na-ajụ onye ọ bụla n’ime anyị ma jụọ anyị ka anyị zaghachi onwe anyị. Azịza ya dabere ma onye ọ bụla n’ime anyị nwere okwukwe n’ime obi anyị ma ọ bụ na ọ bụghị.
Gini bu azịza gi nye Jisos? Echere na azịza ya bụ "Ee". Ma ọ bụghị naanị azịza ee ma ọ bụ ee. Olileanya ọ bụ a "ee" na-aga n'ihu na-etolite na omimi na n'aka.
Gịnị bụ okwukwe? Okwukwe bu nzaghachi nke onye obula n’ime anyi n’ebe Chineke no bu onye na-ekwu okwu n’ime obi anyi. Iji nwee okwukwe, anyị ga-ebu ụzọ gee Chineke ntị mgbe ọ na-ekwu okwu. Anyi aghaghi ikwe ka O kpughere Onwe Ya nye anyi n'ime omimi nke uche anyi. Mgbe ọ bụla ọ dị, anyị na-egosipụta okwukwe site na ịzaghachi n’ihe nile ọ na-ekpughe. Anyị na-abanye n'okwukwe n'Okwu Ya gwara anyị ma ọ bụ omume a nke ikwere na-agbanwe anyị ma na-akpụzi okwukwe n'ime anyị.
Okwukwe abughi nani ikwere. Ọ bụ ikwere n’ihe Chineke na-agwa anyị. Obu okwukwe ni n'okwu nke ya na nke Ya. Ọ bụ ihe na-akpali mmasị ịmara na mgbe anyị banyere onyinye nke okwukwe, anyị na-eto eto n'eziokwu banyere Chineke na ihe niile ọ na-ekwu n'ụzọ dị egwu. Eziokwu ahu bu ihe Chineke na-acho n'ime ndu anyi, o gha azaza ajuju Ya di n'elu.
Tugharia uche taa n’otu okwukwe gi si zie ezi. Chee echiche banyere mgbe Jizọs jụrụ gị ajụjụ a. Ndi enye eyekụt mbuọtidem ke esịt fo? Mee ka “ee” gị bụrụ nke na-eto ma sonye n’ihe miri emi ị na-ekpughere gị kwa ụbọchị. Atụla egwu ịchọ olu ya ka ị nwee ike ị sị "Ee" n'ihe niile ọ na-ekpughe.
Onyenweanyị, achọrọ m ito eto n'okwukwe. Achọrọ m itolite n'ịhụnanya m na n'ọmụma nke Gị. Ka okwukwe di ndu na ndu m ma ichota okwukwe ahu dika onyinye di oke onu ahia m n’enye gi. Jesus ekwere m na gị.